AMAKHANDLELA ALI-10 EAROMATHERAPY ANOKUKWENZA UZIVE WONWABILE KWAYE UNOXINZELELO OLUNCINCI | UTHINTELO - UBOMI
Amakhandlela ali-10 eAromatherapy anokuKwenza uzive wonwabile kwaye Unoxinzelelo oluncinci
Iphunga linokuba nefuthe eliphakamisayo engqondweni nasemzimbeni — eso sisiseko se-aromatherapy, okanye ukusetyenziswa kwezityalo, izinto zendalo (iioyile ezifanelekileyo) ukuphucula impilo yakho yonke.
Iimolekyuli zephunga zenziwe ukuba zilingane kwii-receptors kwingqondo ezibangela iimpendulo ze-neuroendocrine ezichaphazela imeko yethu, amandla, okanye iimpendulo zomzimba, ucacisa uKarin Parramore LAc, CH, umbhali we I-Aromatherapy enesixhobo sokuHlukanisa ioyile esifanelekileyo: Impilo yemihla ngemihla kunye nokuPhila .
Ezinye ii-oyile ezifanelekileyo zineekhompawundi ezilinganisa isenzo samahomoni endogenous kunye nokukhuthaza imveliso ye-glucocorticoids, 'uhlobo lwehomoni ye-steroid eveliswa yindlala ye-adrenal, utshilo uParramore. 'IiGlucocorticoids ziyaziwa ukunceda umzimba ulawule uxinzelelo, kwaye Izifundo zibonisa baneziphumo ezichasene nokudumba emzimbeni. Njengoko iintsuku zifutshane kodwa zixakekile ngeli xesha lonyaka, ngubani ongakwazanga ukusebenzisa isiqabu esincinci soxinzelelo?
Iioyile eziyimfuneko zinokungeniswa ngokungangqalanga ngokungahambisi ngendlela yokusasaza (njengenye yezi Ezona zi-8 zeoyile zibalulekileyo ) okanye ngekhandlela. Kodwa ayingawo onke amakhandlela anevumba elimnandi elenziwe lalingana: Zisa impilo encinci kunye nolonwabo ekhayeni lakho nelinye lala makhandlela ali-10 enziwe ngeoyile eziyimfuneko, hayi iziqholo zokwenziwa.
Yima ujikeleze indalo Honeysuckle Jasmine Aromatherapy Candle
Ngaba unesidingo esibi sokukhutshwa kwengqondo kunye nomzimba emva kweveki ende yomsebenzi? UJasmine (igama lezityalo: Jasminum offinale ) ithatha indawo kwinkqubo yemithambo-luvo, yiyo loo nto inokunceda ukunciphisa uxinzelelo kunye noxinzelelo, kubandakanya uxinzelelo lwemisipha, utshilo uParramore. Le khandlela yendalo yonke eyenziwe nge-wax ekhuliswe yi-soy yase-US inokuba yile nto uyifunayo.
Thenga ngoku: $ 23, amazon.com
I-Heirloom Pure Peppermint Ikhandlela
Njengokuba kusiba mnyama ngaphambili, kuya kusiba nzima ukushiya indlu yakho efudumeleyo, ethambileyo kwaye uyokuyitshayisa kwindawo yokuzivocavoca. Kodwa isifundo seklinikhi epapashwe kwi Ijenali yoMbutho waMazwe ngaMazwe weSondlo sezeMidlalo ixhasa izibonelelo zeoyile yepepermint ( UMentha piperita Ukuphefumla nokwenza umthambo, ke zama ukukhanyisa le khandlela ngaphambi kweseshoni elandelayo. (Nantsi iti yepepermint ingakuvusa njani kunye nekofu .)
Thenga ngoku: $ 13, amazon.com
Ikhandlela laseAgraria iSan Francisco elikrakra
Ukuba uziva uxhalabile malunga neprojekthi emsebenzini okanye enye into esondeleyo, thatha le nto inevumba elimnandi. Ubukrakra orenji ( Icitrus aurantium ) isetyenziswa njengonyango lwexhala kwamanye amazwe, kunye a Ufundo luka-2011 eqhutywa yiYunivesithi yase-Shahrekord yezeNzululwazi e-Iran ifumanise ukuba inokunceda ukunciphisa uxinzelelo kwizigulana zangaphambi kokusebenza malunga nokwenza imisebenzi emincinci.
Thenga ngoku: $ 25, amazon.com
Ikhandlela leViois Lavender Aromatherapy
Ziphakamise (okanye ucofe phantsi) ngelavenda. Ngokuchasene nenkolelo edumileyo, i-lavender ( ILavandula angustifolia ) ayihlali, kodwa iyalinganisa, utshilo uParramore. 'Ukuba kukho amandla amaninzi kunceda ukuzola, kodwa ukuba amandla ayafuneka angongezwa ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo kwimixube yamandla akhulayo. Le iza ngembiza entle yentsimbi eyenza ukuba ilungele izipho, nayo. ( Nika ezi zipho zi-15 zoxinzelelo zoxinzelelo kumntu ekufuneka epholile ngokwenene .)
999 intsingiselo yokomoya
Thenga ngoku: $ 20, amazon.com
Ikhandlela ye-Beeswax yeQualitas
Vetiver ( Chrysopogon zizanioides Luhlobo lwengca enencasa yemveli eIndiya, kwaye inesiko elide lokusetyenziswa kwiyeza laseAyurvedic ngenxa yeempawu zalo zokuthomalalisa kunye nokuzola. Olu phando kubantwana abane-ADHD bayawaxhasa la mabango, njengoko ifumanise ukuba ukufunxa iioyile ezifanelekileyo zevetiver kunye nomthi womsedare kuphuculwe iipateni zobuchopho kunye neempawu ze-ADHD zabathathi-nxaxheba. Ngexesha elizayo xa ungeke ukwazi ukugxila, khanyisa le khandlela le-bex ye-woodsy.
Thenga ngoku: $ 54, amazon.com
UNksk Meyers Geranium Soy Candle
Zama igeranium yokukhusela iimpawu ze-PMS. IGeranium ( IPelargonium tombolens Unembali ende yokusetyenziswa kokulinganisa iihormoni kwabasetyhini kwaye isebenza njengento evuselelayo kwinkqubo ye-endocrine, utshilo uParramore. Ioyile ibonakalisiwe ukunciphisa ezinye zeempembelelo eziqhelekileyo ze-PMS-ukucaphuka, ukuthamba kwebele, kunye nentlungu. (Oku kutya kuku-6 kunokunceda ekulweni ne-PMS ngokwendalo.)
Thenga ngoku: $ 17, amazon.com
Ibhafu kunye neMizimba isebenza ngeLemon Phakathi kweWick Candle
Phantse akunakwenzeka ukuba ube nemimoya elungileyo xa uziva ugula kwisisu sakho kwaye ujongile. Kodwa a Ufundo luka-2014 kwabasetyhini abakhulelweyo (uninzi lwabo ngelishwa besazi kakuhle isicaphucaphu) bafumanise ukuba ilamuni Icitrus yelimoni ) I-aromatherapy inamandla okudambisa isicaphucaphu kunye nokugabha-nokuba uphakathi kokubona iimpawu.
Thenga ngoku: $ 18, amazon.com
Gcina i-ginger ekhethiweyo ngaphakathi kwengalo yokufikelela kunye nale recipe elula:
ULucia Damask Rose kunye nekhandlela leCypress
Akukho nto imbi njengokulala kakubi ebusuku. Ukuba unengxaki yokungabikho kobusuku bokuphosa nokujika, ivumba leDamask lenyuka ( URosa damascene ) inokukunceda ubambe ezinye ze-Zs ezisemgangathweni: Emva kokwenza iDamask rose aromatherapy kubusuku obulandelayo, abaphandi bafumanise ukuba umgangatho wokulala kwizigulana zabo uphuculwe. I-Parramore yongeza, iRose ithathwa njengeoyile 'euphoric' kwaye inokuboleka imvakalelo yoxolo kunye nokuphumla nakweyiphi na indawo, ngentlawulo encinci. (Ngoncedo ngakumbi ukulala, zama omnye waba matshini banengxolo emhlophe abakalwe phezulu .)
Thenga ngoku: $ 19, amazon.com
I-Lavender ye-Creative Energy kunye ne-Rosemary Aromatherapy Candle
Ngaba uxinzelelo malunga novavanyo oluzayo, udliwanondlebe okanye intlanganiso enkulu? Uphando kubafundi abaphumeleleyo abongikazi ubonakalisile ukuba i-combo entsha ye-rosemary ( Rosmarinus officinalis kunye ne-lavender ( ILavandula angustifolia ) unokumisa ukubetha kwentliziyo yakho ekubalekeni nasehliseni uxinzelelo lwakho ngaphambi kokuba kuvavanywe.
Thenga ngoku: $ 30, amazon.com
Inkampani yethu eyeKhandlela yeEucalyptus Aromatherapy
Ingqele eqhelekileyo ingawakhupha amandla akho, kodwa ivumba leeucalyptus linokukunceda. Eucalyptus ( I-Eucalyptus globulus ; I-Eucalyptus radiata , kunye nezinye iintlobo) yaziwa ikakhulu njengoncedo kwinkqubo yokuphefumla kwaye inokunceda ukuvula iisinji ezivalekile okanye ukuhambisa ukuxinana emiphungeni, utshilo uParramore. '[Isenokunceda kwakhona ukunciphisa ixesha lokubanda okanye umkhuhlane.
Thenga ngoku: $ 27 nge-3, amazon.com
Ungalifumana njani ivumba lakho kunye nencasa kwakhona
inombolo yokomoya 222
izihlangu zokuhamba kwabafazi ngenkxaso yeArch
kutheni uDolly enxiba imikhono emide
olona nyameko lolusu kulusu olugugayo